သက်တန့်ချို: Woo !! ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်စားသောက်ဖွယ်ရာများ
စာကလေးကင်တွေဆိုတာကတော့ လူကြိုက်များတဲ့ လမ်းဘေးအစားအစာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ တုတ်ချောင်းလေးတွေ နဲ့သီ လို့ ရောင်းချတဲ့ စာကလေးကင်ကို လူတွေက နှစ်ခြိုက်စွာ စားသုံးကြ တာကို လည်းတွေ့ရတယ် ။ တခါတရံ လမ်းကြားတွေကြားမှာ ဘီယာလေးတွေစုပ်ရင်း စာကလေးကင်နဲ့ မြည်းစမ်း တတ်ကြသေးတယ် ။ ကြွတ်ပြီးလတ်ဆတ်တဲ့အရသာရှိသလို တရုတ်ပြည်ရဲ့လမ်းမတွေမှာ အလွယ်တ ကူ ရရှိနိုင်တဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တယ် ။
ကင်းမြီးကောက်တွေ ၊ ပိုးဟပ် တွေ ၊ ပိုးတောင်မာ ၊ ပိုးခြည်ထုတ်သည့်ပိုးကောင် ၊ ပိုးတုံးလုံး စတဲ့အကောင်တွေ ကို တုတ်နဲ့သီ ပြီး ကင်ရောင်းတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် ။ တရုတ်ပြည်မှာ ထင်ရှားတဲ့ လမ်းဘေးအစား အစာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး တခါတရံ လူတွေက စားပွဲတွေနဲ့ ညစာစားပွဲတွေမှာပါ ဒီလိုအစားအစာတွေကို ထည့်သွင်း ဧည့်ခံလာတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။
အဓိကကတော့ ဇီဝစိုးးငှက်ရဲ့ အသိုက်ကို စွပ်ပြုတ်အဖြစ် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဇီဝစိုးငှက်တွေ ကတော့ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ လှိုဏ်ဂူတွေမှာ အဓိကနေထိုင်လေ့ရှိပါတယ် ။ ဇီဝစိုးငှက်တွေဟာ အ သိုက်ဆောက် တဲ့အခါ သူ တို့ရဲ့အန်ဖက် တံတွေးစသည်တို့နဲ့ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး ဒီလိုလုပ်တဲ့ငှက်ဆိုလို့ ဒီငှက်တွေ ပဲရှိပါတယ် ။ ငှက်သိုက်တွေကို ခွာယူတဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမှာဖြစ်ပြီး ၀ါးလုံးရှည်တွေနဲ့ မှောင်မည်းနေတဲ့ လှိုဏ်ဂူအ တွင်းသို့ ဟန်ချက်ညီအောင်ထိုးသွင်းပြီး ကုပ်တွယ်ယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ပင်လယ် သခွားမွှေး လိုမျိုးငှက် သိုက်ဟာ အလွန်အရသာရှိလှပါတယ် ။ ကျန်းမာရေးအတွက်အားဖြည့်အစားအစာအနေနဲ့ အသုံးပြု တဲ့အတွက် ငှက်သိုက် ဟာ အတော်လေး ကိုရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ် ။
တရုတ်ပြည်မှာ တခြား ထင်ရှားတဲ့အစားအစာကတော့ ခွေးဦးနှောက်စွပ်ပြုတ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ခွေးဦးနှောက်ဟာ ပရိုတိန်းတွေပြည့်ဝပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ပူနွေးစေတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆရှိကြပါတယ် ။ ခွေးဦးနှောက်သာမက တခြား အဂါင်္အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါ တရုတ်ပြည်မှာ ပေါများစွာ စားသုံးကြပါတယ် ။
ခရုခွံတွေကို တ၀က်တပျက် ပြုတ်ထားပြီး အထဲက အသားကို အချဉ်နဲ့စားသုံးရတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ် ။ ချော မွတ်ပြီး အရသာရှိတယ်လို့ စားဖူးသူတွေကပြောပါတယ် ။ အခွံထဲကနေ အသားကို သတ်သတ် စုပ်ယူစား သုံးတတ် ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ် ။
အိုး ဒါကတော့တကယ့်ကို ဆိုးပါပေတယ် ။ ဒီလို အညိုရောင် အချဉ်ရည်ထဲမှာ ပုဇွန်ရှင်တွေကို စားဖို့က တကယ့် ကို မလွယ်ကူပါဘူး ။ သင့်ပါးစပ်ထဲကို လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေတဲ့ပုဇွန်ရှင်တွေ ထည့်ဖို့ သင်စဉ်း စားကြည့် ပါဦး ဒီလိုလုပ်ရမှာ စားရမယ်ဆိုရင် သင်လုပ်နိုင်ပါ့မလား ။
လူကြိုက်များတဲ့ ဟင်းမဟုတ်ပေမယ့် တရုတ်ပြည်မှာတော့ ဒါကို ပုံမှန်အစားအစာ မူနူးတွေမှာ တွေ့လာရပါပြီ ။ စားချင်တဲ့သူတွေစားနိုင်အောင် ၀က်ဦးနှောက်ဟင်းကို စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ရရှိနိုင်အောင် စီစဉ်ထား ပါတယ် တဲ့ ။
ဒါကလည်း ကတယ့်ကို ဆိုးပါပေတယ်ဗျာ ဒီလိုစားအစာတွေကို ဘယ်လိုစားသောက်ရပါ့မလဲနော် တိရိစ္ဆာန်တွေ ရဲ့အမြီးတွေကို ခုတ်ပိုင်းပြီးတော့ ကင်ထားတာပါတဲ့ ။
မြွေကို ကင်ပြီးစားတာကတော့ တရုတ်ပြည်မှာ အလွန်ကိုရေပန်းစားပါတယ် ။ အရင်ဆုံးမြွေကို ကင်လိုက်တယ် အရေခွံ မနွှာဘူးနော် ပြီးတော့ အပူပေးတယ် ။ စားဖူးတဲ့လူတွေပြောတာကတော့ အရသာအရှိဆုံး နတ်သဒ္ဓါ့ပါတဲ့ ကဲ ကိုယ်မှမစားဖူးတာ ဘယ်သိမလဲနော် ။
အားလား လား ကိတ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဦး ဒါကို စားဖို့ သင် သတ္တိအတော်မွေးရလိမ့်မယ် ။ ဒီအရသာက ဘယ်လိုနေမလဲမသိပေမယ့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို ကြည့်ယုံနဲ့ အတော်ပျို့အန်ချင်မိတယ် ။ ဘယ်လို လူတွေ စားကြတာပါလိမ့်နော် ။ ကြွက်ပေါက်လေးတွေကို မွေးမွေးပြီးချင်း ဒီလို ကိတ်ထဲမှာ အလှဆင်စား သုံးကြတာပါတဲ့ ။
တရုတ်ပြည်မှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်သတဲ့ အရပ်ကတို့ရေ ။ အရင်တုန်းကတော့ ဒီလိုအစာတွေကို ချက်ပြီးမှသာ ရနိုင်ပေမယ့်အခုတော့ ရှော့ပင်းမောလ်တွေမှာ တိရိစ္ဆာန် လိင်တံတွေ ၀ယ်လို့ရနေပါပြီတဲ့ ။ စားဖို့အတွက် ချက်ပြီး သားနဲ့မချက်ရသေးခင် အနေအထားတွေကို သေချာထုပ်ပိုးပြီးရောင်းတာပါတဲ့ ။
ခွေးသားဟာ လူစားများတဲ့အစားအစာအဖြစ် စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ရရှိလို့နေပါပြီ ။ အခုတီထွင် လိုက်တာ ကတော့ခွေး သားကို အရွက်တွေနဲ့လိပ်ပြီး ခွေးသားအလိပ်ဖြစ်သတဲ့ ဗျာ ။ တခါတရံ ခွေးလေးတွေကို စားသောက် ဆိုင် အပြင်ဖက်မှာ ပြသထားပြီး ခွေးသား အစစ်ဖြစ်ကြောင်း လတ် ဆတ်ကြောင်း ကြော်ငြာရောင်း ပါသ တဲ့ ။ ခွေးလေးတွေရဲ့ မျက်ဝန်းက ကြောက်လန့်မှုတွေနဲ့ ၀မ်းနည်းပူဆွေး ရိပ်တွေကို ကိုယ့်လူတို့ မြင်ယောင် ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါ ။ အိုး ဆိုးလိုက်တဲ့ လူတွေဗျာ ။
သက်တန့်ချို ရှာဖွေစုစည်းသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 1:12 PM
ပိတောက် December 13, 2011 at 2:27 PM
မဒမ်ကိုး December 13, 2011 at 2:59 PM
ဟား ကိုသက်တန့်ရယ် ရှာတင်နိုင်တဲ့သူကိုလည်းတကယ်ချီးကျူးတယ်
အောင်မလေး ထမင်းစားမကောင်းပါဘူးဆိုနေမှ ဆရာသက်တန့်ရယ်း(
မငုံ December 13, 2011 at 3:37 PM
အီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးဘယ်လိုများ အရသာခံစားကြပါလိမ့်.. မစားရဲပေါင်
OMG, they eat everything, recently seen on the news they also eat dead child in order to enhance sex power, ridiculous , sick sick sick
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 13, 2011 at 11:17 PM
ဘယ်လိုသတ္တိတွေနဲ့များ ဒီလိုအစားသောက်တွေကို စားနေကြပါလိမ့် ...နော်...
Anonymous December 17, 2011 at 6:50 AM
တရုတ်တွေမစားတာဆိုလို့ မြေပြင်မှာခုတင်နဲ့ဝေဟင်မှာလေယဉ်ပဲရှိတယ်.....
အယ်နီ February 16, 2012 at 4:10 PM
သနားစရာကောင်းလိုက်တာ...ဘာလို့ဒီလောက် အစားပက်စက်ရတာလဲနော်....ကြင်နာမှု့မရှိလိုက်ကြတာ...အစားတလုတ်အတွက် :(